दुई करोड तिर्न नसकेपछि पर्शुराम बस्नेत जेल चलान | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← आँप खाँदै हुनुहुन्छ ? सावधान !
जिया खानको आत्महत्याको कारण खुल्दै →
दुई करोड तिर्न नसकेपछि पर्शुराम बस्नेत जेल चलान
Posted on 10/06/2013 by शिव पौडेल | टिप्पणी छोड्नुहोस्
काठमाडौं, जेष्ठ २७ – विशेष अदालतले मागेको धरौटी तिर्न नसकेपछि विराटनगरमा डनका रुपमा चिनिएका पर्शुराम वस्नेत सोमबार जेल चलान भएका छन् । अवैध रुपम अकुत सम्पत्ति कमाएको अभियोग लागेका वस्नेतलाई सोमबार विशेष अदालतले २ करोड धरौटी मागेको हो । वस्नेतकी श्रीमती अन्जुसिंह वस्नेत भने साधारण तारेखमा रिहा भएकी छन् । वस्नेतलाइ केन्द्रीय कारागार पठाइएको छ ।
सम्पत्ती सुद्धिकरण विभागले अवैध रुपमा अकुत सम्पत्ति कमाएको आरोपमा वस्नेतमाथि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । वस्नेतले ११ करोड ६१ लाख ४१ हजार ९ सय ७७ रुपैयाँ अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप छ । सोमबार बिहान श्रीमती अन्जु सहित विशेष अदालतमा वस्नेत आफै हाजिर भएका थिए । विभागले वस्नेत सहित डन भनेर चिनिएका अभिसेक गिरी, दीपक मनाङे, चक्रे मिलन र गणेश लामा माथि अवैध सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा मुद्दा चलाएको छ । त्यसमध्ये वस्नेत अदालतमा उपस्थित हुने पहिलो हुन् ।